Hull, Bottom & Tank Corrosion Protection (၂) ~ MSU Portal
Hull, Bottom & Tank Corrosion Protection (၂)
6/30/2012 08:24:00 AM ကိုထွန်း No comments
ICCP ဆိုတဲ့ Impressed Current Cathodic Protection System အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံဟာ၊ Sacrificial Anode Protection System အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ vulnerable material ဆိုတဲ့ electrons တွေပိုမိုထုတ်ပေးမယ့်၊ သတ္တုတမျိုးကိုအသုံးပြုကာ၊ အခြားသတ္တုတခုသို့ reverse direction အနေနဲ့ စီးဆင်းစေပြီး၊ corrosion rate ကိုလျှော့ချတာဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် vulnerable material တခုခုကို၊ galvanic anode အနေနဲ့အသုံးပြုကာ၊ ပြင်ပမှ DC current ကို anodes အတွင်းပေးသွင်းပြီး၊ protective current ထုတ်ယူခြင်းလို့ဆိုနိင်ပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် graphite, silicon iron, lead alloy နဲ့ platinised metals တွေကို၊ galvanic anode အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Anodic reaction
M ဟာ၊ metal ရဲ့ atomic symbol ဖြစ်ပြီး၊ n ကတော့၊ reaction မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့်၊ electron အရည် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ 'Anodic reaction' အရ၊ steel surface မှာ excess flow အနေနဲ့ electrons တွေ ကို ပိုမိုစီးဆင်းစေမယ်ဆိုရင်၊ steel ရဲ့ cathodic polarization ကျဆင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ICCP system ဟာ၊ conductive electrolyte တခုခုအတွင်းမှာပေါါပေါက်လာမယ့်၊ metal ရဲ့ open circuit potential လို့ခေါါတဲ့ unique corrosion potential ကို၊ ပြင်ပမှ electric current ပေးသွင်းကာ၊ fixed value အနေနဲ့ ထိမ်းညှိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ potential ကို fixed အနေနဲ့ controlled လုပ်ထားတဲ့အခါ၊ metal မှာ 'anodic dissolution' မပေါါပေါက်နိုင်တော့အတွက်၊ sacrificial anodes တွေလို၊ စားသွားခြင်း မရှိတော့သလို၊ corrosion ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Fig. Basic ICCP system
ICCP system မှာ အဓိကပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့၊ power supply, AC signal ကို DC signal အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမယ့်၊ transformer-rectifier, anode, reference electrodes နဲ့ dielectric shield တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ dielectric shield ဟာ anode နဲ့ hull plate တို့ကို၊ short current အနေနဲ့စီးဆင်း မသွားစေဖို့ တားဆီးပေးပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့၊ vulnerable material ဆိုတဲ့ anodes တွေဟာ၊ corrosion resistance ရှိတဲ့၊ anodes တွေဖြစ်သလို၊ low resistance current flow anodes တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ICCP anodes တွေ အဖြစ်၊ solid platinum anodes, platinum coated titanium anodes နဲ့ platinized niobium anodes တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ICCP system ဟာ၊ power supply operating range ပေါါမူတည်ပြီး၊ protective current ပမာဏ အများအပြား ရနိုင်သလို၊ anodes အသစ်တွေနဲ့ လှဲလှယ်အစားထိုးဖို့၊ မလိုတဲ့ protection system လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ anode အရည်အတွက်အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုထားတဲ့ အတွက်၊
သဘေ်ာရဲ့ hull drag နဲ့ fuel consumption အပြောင်းအလဲမရှိတော့ပေမယ့်၊ စတင်တတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ initial cost မြင့်မားတဲ့ corrosion protection system ဖြစ်ပါတယ်။
အပူပိုင်းဇုံလို့ခေါါတဲ့ tropical area မှာသွားလာဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်တာမဟုတ်ပဲ၊ cooled region ဆိုတဲ့၊ အအေးပိုင်းဒေသတွေ အပါအဝင် နေရာအနှံ့သွားလာဖို့၊ ရည်ရွယ်တည်ဆောက်တဲ့ သဘေ်ာတွေမှာ၊ inboard stern tube bearing cooling system အတွက်၊ sea water ကိုမသုံးပဲ၊ lubricating oil ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ stern tube bearing lubricating oil ဟာ သဘေ်ာရဲ့ hull နဲ့ propeller shaft ကြားမှာ၊ electrical insulator အနေနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် inboard နဲ့ outboard stern tube bearings တွေ ဟာ၊ non-metallic bearings တွေဖြစ်ခဲ့ရင် hull နဲ့ propeller shaft ကြားမှာ၊ insulator အနေနဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Propeller shaft/ Tail shaft corrosion
Fig. Propeller blade cavitation corrosion
Fig. Propeller blade galvanic corrosion
propeller shaft လည်ပတ်မှုကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ static electricity ကြောင့်၊ hull နဲ့ propeller ကြားမှာ၊ electrical potential ဖြစ်ပေါါ လာပြီး၊ hull နဲ့ propeller blade, propeller boss နဲ့ propeller shaft/ tail shaft metal တွေကို corrosion ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ propeller လည်ပတ်မှုမှ တဆင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ 'cavitation' ကြောင့်၊ propeller blade တွေ propeller boss တွေပျက်စီးသလို၊ hull နဲ့ propeller ကြားမှ၊ electrical potential ကြောင့်လည်း propeller blades နဲ့ boss မှာ corrosion ဖြစ်ကာ ပျက်စီးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အကြောင်းတခုခုကြောင့် stern tube bearing seal damage ဖြစ်ကာ၊ lubricating oil နဲ့ ပင်လယ်ရေရေနှောသွားတဲ့အခါ၊ shaft နဲ့ hull ကြားမှာ၊ မြင့်မားတဲ့ heavy current flow ဖြစ်ပေါါတတ် သလို၊ current flow ကြောင့် bearing မှာ နက်ရှိုင်းတဲ့ deep pitting တွေပေါါပေါက် တတ်ပါတယ်။ main engine နဲ့ intermediate shaft ရဲ့ plumber block bearings တွေ၊ excessive wear ဖြစ်နေရင်လည်း၊ heavy current flow ဖြစ်ပေါါတတ်သလို၊ အခန့်မသင့်လျှင် spark erosion ကိုပါဖြစ်ပေါါစေတတ်ပါတယ်။
Fig. Propeller shaft earthing device
hull နဲ့ propeller shaft ကြားမှာ၊ lubricating oil ဟာ၊ insulation အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခါ၊ Sacrificial Anode Protection System နဲ့ Impressed Current Cathodic Protection System တွေတတ်ဆင် ထားပေမယ့်၊ corrosion ဖြစ်ပေါါမှုကို၊ မတားဆီးနိုင်တာတွေ့ရ ပါတယ်။ propeller shaft လည်ပတ်မှုကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ static electricity ဟာ၊ hull နဲ့ propeller ကြားမှာ၊ electrical potential အနေနဲ့ ရှိနေတဲ့အတွက်၊ current ကို hull သို့စီးဆင်းစေခြင်းဖြင့် corrosion ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့ spark erosion ကိုပါတားဆီးဖို့အတွက်၊ Propeller shaft earthing device ကို မရှိမဖြစ်တတ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Sea water pipe fouling
marine growth တွေဖြစ်တဲ့၊ mollusks, barnacles, mussels, algae နဲ့ slime အစရှိတဲ့၊ အဏ္ဏဝါဇီဝ သက်ရှိတွေဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ sea water system အတွင်း temperature, nutrients, pH factor အစရှိတဲ့၊ environmental conditions တွေကောင်းမွန်မယ့်နေရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီး တွယ်ကပ်ကြပါတယ်။ တွယ်ကပ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်းမျိုးပွားပေါက်ဖွားလာကြပြီး၊ fouling အနေနဲ့ ဖွဲ့တည်ကာ၊ sea water flow မှာ၊ turbulence နဲ့ block ဖြစ်စေသလို၊ coolers တွေရဲ့ heat transfer efficiency ကိုပါကျဆင်းစေပါတယ်။
Fig. MGPS system
ဒါ့အပြင် sea water system မှာ corrosion ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ Microbiological Corrosion လို့ခေါါပါတယ်။ sea water system ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ sea chest housing နဲ့ cooler covers တွေ မှာတော့၊ sacrificial anodes တွေတတ်ဆင်ကာ၊ Electrochemical Reactions ကြောင့်ပေါါပေါက်လာမယ့် corrosion ကိုလျှော့ချကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် sea water system ရဲ့ pipe lines တွေမှာဖြစ်ပေါါ လာမယ့် fouling ကိုလျှော့ချဖို့၊ vulnerable material ကို၊ anode အနေနဲ့တတ်ဆင်ကာ၊ current ပေးသွင်းတဲ့  စနစ်၊ အသုံးပြုလာကြပြီး၊ MGPS သို့မဟုတ် Marine Growth Prevention System လို့ခေါါပါတယ်။
Fig. Cooper and aluminum anodes in sea chest
MGPS ဆိုတဲ့ Marine Growth Prevention System ဟာ၊ electrolytic action နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့၊ anti-fouling system တမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ copper နဲ့ aluminum တို့ကို anodes အဖြစ်တတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိသလို၊ soft iron သို့မဟုတ် ferrous anodes တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ anodes တွေကို၊ sea chest နဲ့ strainer housing အဝင်မှာတတ်ဆင်ကာ၊ ပြင်ပမှ DC current ကို၊ anodes များ အတွင်းသို့ပေးသွင်းပါတယ်။ anodes တွေကို၊ current ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ ions နဲ့ floc တွေထွက်လာပြီး၊ sea water နဲ့အတူ piping system တလျှောက်ကိုရောက်ရှိသွားကာ၊ အဏ္ဏဝါ ဇီဝသက်ရှိတွေမနေနိုင်တဲ့၊ environmental conditions မျိုးဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ copper မှထုတ်ပေးတဲ့ ions တွေဟာ၊ ပမာဏအားဖြင့်အလွန့်လွန် နည်းပါးပြီး၊ extremely small amount ရယ်လို့ပြောနိုင် သလို၊ sea water (၁) လီတာ မှာ၊ micrograms ခန့်သာပါဝင်ပါတယ်။ electrolytic action ကြောင့် ပေါါပေါက် လာတဲ့ aluminum hydroxide floc တွေကလည်း၊ pipe line မှာ protective film အနေနဲ့ အလွှာပါးလေး တခု အဖြစ်ဖွဲ့တည်ပြီး၊ corrosion ဖြစ်ပေါါမှုကိုတားဆီးပါတယ်။
Reference : D. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, New Jersey (1996)
Image credit to : http://www.esru.strath.ac.uk/, http://blog.marport.com/, http://www.alvimcleantech.com/, http://itars.com.br/conteudo/biofouling.htm, http://www.nstcenter.com/, http://www.iccp-mgps.com/, http://www.farwestcorrosion.com, http://www.incorr.com.sg/, http://naval-architect-jobs.blogspot.com/, http://www.seafresh.co.uk/, http://www.nstcenter.com/, http://www.incorr.com.sg, http://www.iccp-mgps.com, http://www.amteccorrosion.co.uk/, http://www.mechanical-writings.com/, http://www.electrochemlab.com/, http://alliedreliabilityblog.com/, http://www.asminternational.org/, http://www.stoprust.com/, http://masteel.co.uk/
Posted in: guide,knowledge,ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ
သင်သည် အမှန်တကယ် ဘွဲရ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီလား
Hull, Bottom & Tank Corrosion Protection (၁)
Understanding the ship's pivot point
Rules and Chart Work .
ဆူဘရာမားနီးယမ်းရဲ့ Practical Navigation စာအုပ်
စီးမင်းရှစ်examiner စာအုပ်နှင့် cd ဆော့ဝဲ
Classification Societies တွေရဲ့ အစ
3 Point Fix
Colreg 72 examiner
ဘောင်းဒစ်ခ်ျ navigation စာအုပ်
Safe Speed Presentation Video
Change Your Windows Log On Pic by Yourself .
Ballast Water Presentation
Morse ကုဒ် တွေကို PC မှာလေ့ကျင့်ကြမယ်...
ဒီဂျေဟောက်စ် ရဲ့ Seamanship စာအုပ်
Unit တွေပြောင်းဖို့ ...
marlins english test trainer for my friends
Marlins english စာအုပ်နှင့် Audio cd
definitions 8000ကျော်ပါတဲ့ nautical term dictionar...
ABသွေး ၊ A - သွေး ၊ B-သွေး ၊ O-သွေး ပိုင်ရှင်တို့ရ...
International Transport Worker’s Federation – ITF ...
လွတ်လပ်သော သင်္ဘောသား သမဂ္ဂ ပေါ်ပေါက်သင့်ပြီ
mariner များအတွက် screensaver
Worldwide Nautical Schools List
ရေကြောင်းအရာရှိနှုတ်ဖြေ အတွက် လေ့လာရန် စာအုပ်
COLLISION REGULATION BOOK
Hand Book for Junior Nautical Officer(Capt - Moe K...
မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျောက်ထားမည့်သ...